जैमिनीको जैदिस्थित कालितिरदेखि हाँडीकोट शिरसम्मको पैदल यात्रा (फोटो फिचर सहित) | Samacharpati जैमिनीको जैदिस्थित कालितिरदेखि हाँडीकोट शिरसम्मको पैदल यात्रा (फोटो फिचर सहित) – Samacharpati
सागर गिरी , हरेक मानिसको इच्छा हुन्छन, नयाँ ठाउँ घुम्ने र रमाइलो गर्ने । बागलुङ बजारबाट करिब तीन घन्टाको यात्रा, घुलो र कठिन बाटो, खाल्डा खुल्डी, अनि मोटरसाइकलको रमाइलो यात्रा गर्दै जैदी पुग्न सकिन्छ ।
जैमिनी नगरपालिकाको जैदीलाई पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न जैदीमा नै जन्मिएर ख्याति कमाएका फोटो पत्रकार एबम साहित्यकार आर,के अदिप्त गिरि, नेपाल पत्रकार महासङ बागलुङका अध्यक्ष दिल श्रीस, सचीव राम थापा , पत्रकार बिजय राना , फोटो पत्रकार सुमन जि,सि , रुपेस सापकोटा, सज्जन कुमार सिंह, खिम छेत्री, स्थानिय गाएक रमेश सार्थक ,अर्जुन गिरि , र भाइ अमृत सुनार लगायतका १४ जनाको समूहले हाली जैदीको सामुहिक भ्रमण गर्यो।
“पहिला आफ्नो गाउँ चिनौ र पछि मात्र अरुको ठाउँ चिनौला” भन्ने हेतुले हाम्रो टिमले आफ्नो यात्राको शुरुवात जैदीस्थित सुन्तलाको रुख बाट सुरु हुन्छ ।
सुन्तला रुख बाट सुन्दर गाउँ बतासे हुदै र तल सुस्याइएको काली नदिसङै सुन्दर कुइधानको फाटको सुन्दर दृश्य हेर्दै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो । केही तल झर्दै गर्दा बाटोमै पर्ने नागढुङा देखा पर्यो। , “आहा त्यो सुन्दर दृश्य ” (नागढुङ्गा)मा रहेको हात्ती ढुङ्गा पछिल्लो समय यो ठाँउ आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको रुपमा बिकास हुँदै छ । यो ठाउँको उचित प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटक हबका रुपामा बिकास गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको छ । झट्ट हेर्दा हात्तीको आकार जस्तो देखिने यो ढुङ्गाले जो कोहिलाइ पनि मनमोहित पार्न सक्छ ।
हात्ती ढुङ्गा हेरेपछी हाम्रो यात्रा अगाडि बढछ । गौरबको कालीगण्डकी करिडोर हुँदै हामी जैदी र छिस्तिको संगमस्थल बेलबगर पुग्यो। त्यसपछि हामीले कालीगण्डकी नदिकै किनार हुँदै हामी प्रसिद्ध गाइथुनेको यात्रा तय गर्यौ । खेतको बाटो हुँदै जादा त्यो अफ्ट्यारो बाटो , अहो कहाली लाग्दो ! केही खुड्किला निर्माण भएको भए पनि बाटो निकास भएको रहेनछ । तर जसो तसो पुग्यौ ।
“करिब ११ बजेको हुदो हो ,बागलुङ जिल्लाकै गर्मी ठाउँ हो बेलबगर । तर अफ्ट्यारो बाटो पार गर्दै जादा हामी गाइथुने पुग्यौं । कालीकै छेउमा पुग्दा ,आहा स्वर्गीय आनन्द मिल्यो । चिसो हावा र पहाड बाट झरेको चिसो पानीले जो कोहिलाइ पनि लोभ्याउन सक्छ । स्थानीय सरकारले चासो देखाएर केही सिडि निर्माण भए पनि धेरै पुर्बाधार निर्माण गर्न सके पक्कै पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुपमा बिकास गर्न सकिछ । त्यो दिब्य अनुभव लिएपछी हामी खान लाग्यौं ।
केही समयको विश्राम पछि हामीले हाडिकोटको यात्रा तय गर्यौ । त्यो उकालो बाटो , थकान र सृजनसिल आमा समूहद्वारा करिब ७६ हजारमा निर्माण भएको नया चौतारीमा बस्दा स्वर्गीय आनन्द मिल्यो । साथै जैदिका वडा सदस्य बम बहादुर छेत्रीको आथित्य सत्कार र स्थानीय सफल र कर्मशिल कृषकको माहुरी फर्म को दिब्य अनुभव मिल्यो ।
जैदी ,छिस्ती,पर्बत ,गुल्मीको मनोरम दृश्य अबलोकन गर्दै हामी अगाडि बढ्यौं । उकाली पार गर्दै जादा हामी अन्तत बिहारथाला पुग्यौ । त्यहा पुग्दा करिब ६ बजेको हुँदो हो । केही समयको बिश्राम पछी हामी त्यही स्थानीय होटलमा बास बस्यौं ।
भोलिपल्ट बिहान सबेरै ४ बजे चिया पिएर हामीले हाम्रो यात्रा फेरी शुरु गर्यौं । करीब एक घण्टा लामो उकालो चढेपछि बल्ल हामी हाँडिकोट पुग्यौं। त्यहाँ हामीले झन्डै ५र६ घण्टा बितायौं र त्यहाँको अवस्थिति र पर्यटकीय सम्भाव्यताका बारेमा स्थानिय जनतासंग कुराकानी गर्यौं।
हाँडिकोट बारे बुझौं !
दक्षिण जैमिनी नगरपालिका वडा न–१० राङखानी, वडा न ७ जैदी – र वडा न ८ छिस्तीको गमस्थलमा पर्ने ‘हाँडिकोट’ समुद्री सतहदेखि २१ सय ९५ मिटर उचाईमा पर्दछ। प्रचार प्रसार गर्न सके यो आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकको लोकप्रिय गन्तव्यस्थल बन्न सक्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यका पारखीहरुका लागि त यो एउटा दिव्य अनुभव नै हुन्छ ।
हाँडिकोट आफैमा मनमोहक ठाउँ हो, यसबाट खास गरि आकर्षक सूर्योदय देख्न सकिन्छ । सुन्दर हिमश्रृखलाको दृश्यले जो कोहीको मन लोभ्याउन सक्छ । हाँडिकोटबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे ,नीलगिरी, धौलागिरी लगायतका सुन्दर हिमश्रंखलाहरु देख्न सकिन्छ । सुन्दर डाडा बाट तल देखिने बादलको दृश्यले जो कोहिलाइ पनि आकर्षित गर्छ ।
त्यति मात्र नभई हाँडिकोटबाट पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, काँस्की जिल्लाका विभिन्न स्थान समेत देखिन्छ , जसले गर्दा हाँडिकोट पुग्ने जोकोहीलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।
९० हेक्टर जमिनमा फैलिएको हाँडिकोट जडिबुटिको लागि समेत अत्यन्त सम्भावनायुक्त ठाउँ हो । त्यहाँ सतुवा, पाँचऔले,चिराइतो, भुत्केस, रक्तमुल, रक्तताल, पखण्डित, पहेँले लगायत दर्जनौँ प्रकारका जडिबुटी पाईन्छ। तर कसैको चासो नभएको स्थानीय बताउँछन् ।चितुवा, मृग, कालिज, भालु, दुम्सी, फ्याउरो, बाँदर स्याल लगायतका जङ्गली जनावरहरु पाईने भएकाले पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न सक्छन् ।
बाटो, सौचालय, पानी, फोहोर व्यवस्थापन त्यहाँँका तत्कालिन आवश्यकता हुन । तिनै आवश्यकता पूर्ति गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । हाँडिकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणको लागि जैमिनी नगरपालिकाले केही चासो देखाएको छैन । स(साना योजना बनाएर बन्दै गरेका भ्यु टावर र यत्र तत्र योजनाले कुरुप बनाएको छ । हाँडिकोट आफैमा भ्यु टावर हो । राम्रो सुर्योदयको दृश्य , आहा १
पर्यटकलाइ बिशेष सुबिधा दिने र ब्यापक प्रचार प्रसार गर्ने हो भने यस स्थानको पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेको छ । पर्यटकका लागि होम स्टे संचालित भए पनि खासै चर्चामा आउन भने सकेको छैन र उचित ब्यबस्थापन नै छैन ।
खानापछि हामीले फेरी हाम्रो यात्रा अघि बढायौं। हाँडिकोटमा विशेष गित सङितको रमाइलो सङै हामी तल बिहारथाला झर्यौ । अब हाम्रो टिम थन्थाप माइतिर केन्द्रकृत भयो । सुदर भ्युको अबलोकन गर्दै हामी अगाडि बढ्यौं ।
(थन्थाप माइ) माइकोस्थान मन्दिर बारे पनि बुझौं !
साथै हाँडिकोटबाट नजिकै रहेको प्रसिद्ध (थन्थाप माइ) माइकोस्थान मन्दिर बाग्लुङ्ग र जैमिनी नगरपालिकाको पर्यटकीय र धार्मिकस्थलले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ विभिन्न संघ सस्था , स्थानीय , मन्दिर ब्यबस्थापन समिति , वडा , नगरपालिकाले चासो नदेखाउदा र उचित प्रचार प्रसारको अभाबमा ओझेल परेको छ ।
बाग्लुङ्ग कुस्मिसेरा र जैदी हुदै पदमार्ग निर्माण गर्न सकियो भने महत्वपूर्ण स्थानको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तर त्यहाँका बासिन्दासँग गरिएको कुराकानीपछि हामी अलिक दुखित बन्यौं। गुठी सस्थानको जग्गामा राज छ । करिब १७ बर्ष सम्म पुजारिले पारिश्रमिक नपाएको कुरा सुन्दा अत्यन्त मन दुस्खित बन्यो । नगरपालिकाले केही पनि चासो देखाएको छैन । वडाको पनि बेखबर छ । चोरी निकासी भैरहेको छ । तर कसैको चासो नहुदा सम्पदा नै मासिने खतरा बढेर गएको छ।
त्यहाँबाट अघि बढ्दै जानादा हामी पुग्यौं प्राचीन रानिले कपाल कोर्ने ढुङ्गामा । जैमिनी नगरपालिका जैदिको रानीले बसेर कपाल कोर्ने ढुङ्गा समेत ओझेलमा रहेछ । हामिले हेर्दै र बुझ्दै जादा प्राकृतिक सुन्दरता मात्रै यहाँको परिचय होइन रहेछ।
रोचक प्राचीन इतिहास पनि यो ठाउँसँग जोडिएको छ । ढुङ्गामा बसेर जैमिनी जैदि साथै पर्बतका बिबिन्न स्थानको सुन्दर दृश्य समेत देख्न सकिन्छ । प्राचीन २२र२४ राज्यमा प्रयोग भएका अवसेस तथा मन्दिरको आफ्नै विशेषता छ ।
स्थानीयस्तर तथा राज्यबाट संरक्षण र प्रबर्द्धनमा कसैको ध्यान केन्द्रीकृत भएको पाइदैन । एदि यो उचित ब्यस्थापन र प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने पक्कै जैमिनी बासिका लागि खुसिको कुरा हुने छ । अन्तत हामी जैमिनिको सुन्दर दृश्य हेर्दै जादा अर्जेवा चोखेक पुग्यौं ।
सुन्दर हिमालय हेर्दै र चराको मीठो आजव सङै हामि जैदिको प्रसिद्ध सतिढुङ्गा पुग्यौ । सतिप्रथामा ढुङ्गा नाघेर गएको किम्बदन्ती रहेको उक्त स्थानलाई ब्यबस्थित बनाएर राखिएको रहेछ । मन्दिर को दर्शन गरेर हामीले हाम्रो यात्रालाई त्यही टुंग्यायौन र आफ्नो बासस्थानतिर अगाडि बढ्यौं ।
अन्त्यमा स् जैमिनी नगरपालिका जैदीको पर्यटन बिकासको निकै सम्भावना रहेको छ। निकै जनचासो भए पनि ,राज्य बाट र स्थानीय सरकार बाट कुनै पहल भएको छैन । भौगोलिक दृस्टीले पैदलमार्गको प्रचुर सम्भावना रहेपनि कतै बाट आवाज उठ्न सकेको छैन । आगामि दिनमा उचित प्रचार प्रसार गर्दै जादा र सम्बन्धित वडा र नगरपालिकाले चासो देखाए पक्कै पनि पर्यटक हबका रुपमा बिकास हुने छ ।
म्याग्दीमा जिप दुर्घटना हुँदा ९ जना यात्रु घाइते ,गम्भीर दुई जना बेनी अस्पतालबाट मनिपाल रिफर